Ny mixeran'ny planeta roa dia mizara ho motera mifono alim-baravarana, fonony, mpitatitra planeta, mpamporisika, rindrin-rindrina, siny, rafitra fananganana hydraulic hidina tsanganana roa, rafitra sy fantsom-bovoka. Izy io dia fitaovana fampifangaroana vaovao sy mahomby avo lenta amin'ny alàlan'ny fandevonan-kanina sy handraisana teknolojia mandroso ao an-trano sy any ivelany.
Rehefa mihodina ny mpitatitra planeta dia mitondra ireo zana-kazo telo manetsika sy manaparitaka ao anaty boaty izy io mba hihodina manodidina ny axis an'ny barika rehefa mihodina amin'ny hafainganam-pandeha haingana, ka ny fitaovana dia mihintsana amin'ny fanetezam-bolo sy fametahana mafy hahazoana ny tanjon'ny fanaparitahana tanteraka sy fampifangaroana; misy scraper amin'ny mpitatitra planeta Mihodina miaraka amin'ny mpitondra planeta ny antsy rindrina, ary esorina hatrany amin'ny rindrin'ny barika izy io mba ho afaka amin'ny rindrin'ny barika ny fitaovana ary hanatsara ny vokatra mifangaro. Ny halavan'ny fotoana fampifangaroana dia fehezin'ny mpampiasa arakaraka ny toetran'ny fitaovana ary azo ahitsy amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso. Ny fonony sy ny mixer an'ny planeta dia nakarina sy nampidinina tamin'ny tsindry hidradradradrana tsindry roa, ary miorina, haingana sy maivana ny fandidiana.
Ity fitaovana ity dia afaka miasa ao anaty banga ary afaka mamoaka rano sy vokatra hafa tsy tapaka. Noho izany dia azo ampiasaina ho kettle degassing izy io. Ireo fitaovana dia azo hafanaina na ampangatsiahina amin'ny alàlan'ny fanodinana solika sy rano arak'izay takiana; fanafanana etona azo ampiasaina ihany koa. Ny hafanan'ny hafanana dia asehon'ny mpanara-maso ny mari-pana amin'ny tontonana fanaraha-maso.
Ny mpanentana amin'ny planeta dia misy ny fifindran'ny motera, ny moto manaparitaka, ny boaty misy planeta, ny mpamporisika, ny kodia fanaparitahana, ny famolavolana strickle, ny tsorakazo momba ny mari-pana, ny fitoeran-jiro, ny rafitra miakatra / midina, ny rafitra banga, ny heater.
1. Rafitra mamporisika
Ny boaty iray amin'ny planeta dia ampandehanin'ny motera iray hanodinana ny fariben'ny sambo (Revolisiona).
1.1. Spindles roa no mihodina amin'ny axis-ny avy eo am-panarahana ny revolisiona an'ny boatin-planeta planeta, ny fitaovana dia manelingelina ny mpamorona azy mba hamolavolana, famoretana, fanapahana, fanodikodinana, afangaro tanteraka.
1.2. Ny kodiarana fanaparitahana dia entin'ny moterany manokana raha manaraka ny fiovan'ny boaty fitaovana planeta, hanaparitahana, hanapahana, hanambarana ranoka matevina, ranon-dronono, fitaovana ho an'ny fanjakana matanjaka, atambatra amin'ny fikorontanana hahatratra ny tanjon'ny fampifangaroana.
1.3. Ny strickle fanaovana sary dia manaraka ny revolisiona ihany koa hanaraha-maso ny mari-pana ara-materialy.
2. Rafitra Vacuum
Ny famolavolana tombo-kase mazava dia afaka mitazona ny fantsom -0.1Mpa, hamaly ny fepetra takiana amin'ny tsy fahampian-drano sy ny fivoahana.
3. Rafitra fanamainana sy fampangatsiahana
Ireo safidy ireo dia azo amboarina hihaonana amin'ny fizotrany samihafa.
4. Rafitra miakatra / midina
Izy io dia rafitra hydraulic miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta.
Manaraka: Vacuum Emulsifying Mixer